Cleansing Oil ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ? - Lifestyle Myanmar
ယနေ့ခေတ်မှာ cleanser တွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်တွေက အများကြီး ရှိလာပါပြီ။ အဲ့ဒီထဲမှာ cleansing oils တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့က မိတ်ကပ်၊ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးနှင့် Sebum တွေကို အလွယ်ဖယ်ရှားရာမှာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကွာခြားချက်က ခရင်မ်၊ ဂျယ်လ် (သို့) အမြှုပ်ပါတဲ့ ရေမှာပျော်ဝင်သော Cleansers တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အလုပ်လုပ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပျိုမေတို့အတွက် Cleansing Oil သုံးစွဲပုံအဆင့်ဆင့်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး cleansing oils ကို စိုစွတ်နေတဲ့ အသားအရေ (သို့) ခြောက်သွေ့နေတဲ့ အသားအရေပေါ်မှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် cleansing oils ကို လက်ထဲအနည်းငယ်ထည့်ပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းလိုက်ပါ။
မိတ်ကပ်၊ sunscreen နှင့် ပိုနေတဲ့ sebumတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားဖို့ အဆီနဲ့ ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ eye makeup တစ်ခုခု လိမ်းထားရင် မျက်လုံးတဝိုက်ကို cleansing oil နဲ့ ဖွဖွလေး နှိပ်ပေးပါ။
အဆီတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးပြီး မိတ်ကပ်အားလုံး ပျော်ဝင်သွားပြီးနောက်မှာ သင့်လက်တွေကို ရေနည်းနည်းနဲ့ စိုစွက်အောင်လုပ်ပါ၊ မျက်နှာပေါ်က cleansing oil တွေကို နို့လိုပျစ်ချွဲလာစေဖို့ သင့်အရေပြားကို ဆက်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆီက နို့နှစ်ရောင်ပြောင်းလာတာကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရာက အသားအရေကနေ အဆီအကြွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နို့လိုပျစ်ချွဲအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ အကြွင်းအကျန်တွေကို ရေဖြင့် သေချာဆေးကြောပြီး နူးညံ့တဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ ။ သင့်အသားအရေကို ယခုလို သန့်စင်ပြီးနောက်မှာ Skincare routine နောက်အဆင့်တွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
အံကိုက်မဖြစ်တဲ့ ဘရာစီယာကို ဝတ်ဆင်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ?
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘရာစီယာကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ဘရာအမျိုးအစားနဲ့ ရွေးချယ်စရာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို သိကြပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ကမ္ဘာတဝှမ်းက အမျိုးသမီးအများအပြားဟာ ဘရာစီယာဆိုဒ်ကို မှားယွင်းဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ အံကိုက်မဖြစ်တဲ့ ဘရာစီယာဟာ ကြီးကြီးမားမား ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့်...
အစာစားပြီးပြီးချင်း ကော်ဖီကို ဘာကြောင့်မသောက်သင့်တာလဲ?
လူတွေက မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက် (သို့) နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့ cappuccino ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်ရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ။ ဒီအရာကို အကျင့်ဖြစ်နေသူတွေရှိပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အစားအသောက်စားပြီးချိန်မှာ ကော်ဖီသောက်တတ်တဲ့အကျင့်က သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ရုပ်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေထိခိုက်စေနိုင်သလဲ? ၁။ သင့်အသားအရေကို...